ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုသည်မှာ မိမိဘာသာ ပြန်၍ ပုံတူ ပွားနိုင်သော ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ် တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးမှ အခြားတစ်လုံးသို့ ပျံ့နှံ့နိုင်သည်။ ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုသော အသုံးအနှုန်းကို အခြား မလိုလားအပ်သော အက်ဒ်ဝဲလ် နှင့် စပိုင်ဝဲလ် ကဲ့သို့ ပုံတူပွားခြင်း မပြုနိုင်သော ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်မျိုးကိုလည်း မှားယွင်းစွာ ညွှန်းဆိုခေါ်ဝေါ်လေ့ ရှိကြသည်။ ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ် အစစ်အမှန်မှာ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးမှ အခြား ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးသို့ ကူးစက်နိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ် စွဲကပ်နေသော ကွန်ပျူတာမှ အခြားကွန်ပျူတာ တစ်လုံးသို့ ကွန်ယက် သို့မဟုတ် အင်တာနက်မှ ဖြစ်စေ၊ ကွန်ပျူတာတွင် ဖြုတ်တပ်နိုင်သော ဖလော့ပီဒစ်စ်၊ စီဒီ၊ ဒီဗွီဒီ နှင့် ယူအက်စ်ဘီ အစ ရှိသော ကြားခံပစ္စည်းတစ်ခုမှ ဖြစ်စေ ကူးစက်နိုင်သည်။
ဗိုင်းရပ်စ်များသည် ကွန်ယက်ဖိုင်စနစ် ပေါ်တွင် ရှိနေသော ဖိုင်များကို ကူးစက်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြား ကွန်ပျူတာများမှ ယူငင်သုံးစွဲနေသော ဖိုင်စနစ်ကို ကူးစက်ခြင်း အားဖြင့် အခြား ကွန်ပျူတာများသို့ ပျံ့နှံ့နိုင်သော အခွင့်အလမ်းကို ပို၍ များလာစေသည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သလိုပင် ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုသော အသုံးအနှုန်းကို ပြန်လည်မျိုးမပွားနိုင်သော မောလ်ဝဲလ်များကိုလည်း ရည်ညွှန်းလေ့ ရှိကြသည်။ မောလ်ဝဲလ်များတွင် ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ကွန်ပျူတာ ဝမ်းများ၊ ထရိုဂျန် ဟော့စ်များ၊ ရုကစ်များ၊ စပိုင်ဝဲလ်များ၊ မရိုးသားသော ကြော်ငြာဝဲလ်များ နှင့် အခြား ဆိုးယုတ်ပြီး မလိုလားအပ်သော ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ ပါဝင်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်များကို တစ်ခါတစ်ရံတွင် နည်းပညာ အားဖြင့် ကွဲပြားသော ကွန်ပျူတာ ဝမ်းများ ထရိုဂျန်ဟော့စ်များ စသည်တို့ဖြင့် ရောထွေးလေ့ ရှိသည်။ ကွန်ပျူတာဝမ်း များသည် ကွန်ပျူတာ စနစ်၏ လုံခြုံရေး အားနည်းချက် ကို အခွင့်အရေးယူပြီး ကွန်ယက်ပေါ်ရှိ အခြား ကွန်ပျူတာများသို့ သူ့ဘာသာ ပြန်၍ ဖြန့်ဝေလေ့ ရှိသည်။ ထရိုဂျန်ဟော့စ် ဆိုသည်မှာမူ ပုံမှန်အားဖြင့် အန္တရာယ် မရှိသည့် ပရိုဂရမ်ဟု ထင်ရသော်လည်း ဆိုးယုတ်သည့် အလုပ်များကို ကွယ်ဝှက်ထားလေ့ ရှိသော ပရိုဂရမ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ်များ ကဲ့သို့ပင် ဝမ်း များနှင့် ထရိုဂျန်ဟော့စ်များကလည်း ကွန်ပျူတာ အတွင်းရှိ အချက်အလက်များနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း စသည်တို့ကို လျော့ကျစေနိုင်သည်။ အချို့ ဗိုင်းရပ်စ်များ နှင့် အခြားမောဝဲလ်များ၏ လက္ခဏာများမှာ အသုံးပြုသူ အနေနှင့် သတိထားမိစေနိုင်သော်လည်း အများစုမှာ လျို့ဝှက်စွာ စွဲကပ်နေလေ့ ရှိပြီး သူတို့ကို သတိထားမိစေနိုင်သော အလုပ်မျိုး လုပ်လေ့ လုပ်ထ မရှိပေ။ အချို့သော ဗိုင်းရပ်စ်များမှာမူ သူတို့ဘာသာ ပြန်လည် မျိုးပွားခြင်းမှ လွဲ၍ အခြား ဘာမှ လုပ်လေ့ မရှိပေ။
မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ဝပ်ဒ် ပရိုဂရမ်မှ တဆင့် ကူးစက်သော မယ်လီဆာ ဗိုင်းရပ်စ် (Melissa Virus)၊ ကွန်ပျူတာ၏ ဟတ်ဒ်ဝဲလ်ကိုပါ ဖျက်စီးပစ်သော ချာနိုဘိုင်း ဗိုင်းရပ်စ် ၊ အီးမေးလ်မှ တဆင့် ကူးစက်သော ရည်းစားစာ ဗိုင်းရပ်စ် (Love Letter Virus) စသည်တို့မှာ ထင်ရှားသော ဗိုင်းရပ်စ်များ ဖြစ်ကြသည်။
ဗိုင်းရပ်စ်စာရင်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသော ပရိုဂရမ်များပြင်ဆင်
1260 V2Px MS-DOS Polymorphic ၁၉၉၀ First virus to use polymorphic encryption
4K 4096 MS-DOS 1990-01 The first virus to use stealth
5lo MS-DOS 1992-10 Infects .EXE files only
A and A MS-DOS
Abraxas Abraxas5 MS-DOS
Windows 95/98 1993-04 Europe ARCV group Infects COM file. Disk directory listing will be set to the system date and time when infection occurred.
Acid Acid.670, Acid.670a, Avatar.Acid.670, Keeper.Acid.670 MS-DOS
Windows 95/98 1992 Corp-$MZU Infects COM file. Disk directory listing will not be altered.
Acme DOS (Windows 95 MS-DOS) Upon executing infected EXE, this infects another EXE in current directory by makingahidden COM file with same base name.
ABC ABC-2378, ABC.2378, ABC.2905 MS-DOS 1992-10 ABC causes keystrokes on the compromised machine to be repeated.
Ada MS-DOS 1991-10 Argentina The Ada virus mainly targets .COM files, specifically COMMAND.COM.
Agena Agena.723 MS-DOS 1992-09 Spain Infected programs will haveafile length increase of 723 to 738 bytes
AGI-Plan Month 4-6 MS-DOS Mülheim an der Ruhr, Germany AGI-Plan is notable for reappearing in South Africa in what appeared to be an intentional re-release.
Ah David-1173, Tuesday MS-DOS 1991-05 Italy Systems infected with Ah will experience frequent system hangs.
AIDS AIDSB, Hahaha, Taunt MS-DOS 1990 Dr. Joseph Popp AIDS is the first virus known to exploit the MS-DOS "corresponding file" vulnerability.
AirCop Air cop-B, Red State MS-DOS 1990-01 Infects the boot sector of floppy disks.
Alabama Alabama.B MS-DOS 1989-10 Hebrew University, Jerusalem Files infected by Alabama increase in size by 1,560 bytes.
Alcon RSY, Kendesm, Ken&Desmond, Ether MS-DOS 1997-12 Overwrites random information on disk causing damage over time.
AntiCMOS Dueabug in the virus code, the virus fails to erase CMOS information as intended.
ARCV-n MS-DOS 1992-10/1992-11 England, United Kingdom ARCV Group ARCV-n isaterm foralarge family of viruses written by the ARCV group.
Bomber CommanderBomber MS-DOS Bulgaria Polymorphic virus which infects systems by inserting fragments of its code randomly into executable files.
Brain Pakistani flu 1986-01 Lahore, Pakistan Basit and Amjad Farooq Alvi Considered to be the first ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ် for the PC
CIH Chernobyl, Spacefiller Windows 95/98/Me June 1998 Taiwan Taiwan Chen ing-Hau Activates on April 26, in which it destroys partition tables, and tries to overwrite the BIOS.
Eliza MS-DOS 1991-12
Form MS-DOS 1990 Switzerland A very common boot virus, triggers on the 18th of any month.
ILOVEYOU 2000-05-05 Manila, Philippines Reomel Ramores, Onel de Guzman A computer worm that attacked tens of millions of Windows personal computers
Michelangelo MS-DOS 1991-02-04 Australia Ran March6(Michelangelo's birthday)
OneHalf Slovak Bomber, Freelove or Explosion-II MS-DOS 1994 Slovakia Vyvojar It is also known as one of the first viruses to implementatechnique of "patchy infection"
Ontario SBC MS-DOS 1990-07 Ontario, Canada Death Angel
Pikachu virus 2000-06-28 Asia The Pikachu virus is believed to be the first ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ် geared at children.
Scott's Valley MS-DOS 1990-09 Scotts Valley, California, United States Infected files will contain the seemingly meaningless hex string 5E8BDE909081C63200B912082E.
Shankar's Virus W97M.Marker.o Polymorphic Virus 1999-06-03 Sam Rogers Infects Word Documents
SMEG engine MS-DOS Polymorphic 1994 United Kingdom The Black Baron Two viruses were created using the engine: Pathogen and Queeg.
Sunday MS-DOS Jerusalem.Sunday 1989-11 Seattle, Washington, United States Because of an error in coding, the virus fails to execute its payload.
Techno MS-DOS The virus playsatune that was created by the author of the virus
Whale MS-DOS Polymorphic 1990-07-01 Hamburg, Germany R Homer At 9216 bytes, was for its time the largest virus ever discovered.
↑ Vincentas။ "ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ်es in SpyWareLoop.com"၊ 11 July 2013။ 28 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 21 September 2013။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကွန်ပျူတာ_ဗိုင်းရပ်စ်&oldid=650974" မှ ရယူရန်
၂၇ မတ် ၂၀၂၁၊ ၂၃:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ မတ် ၂၀၂၁၊ ၂၃:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။